Author: Fenrinos Malall
Mashruuca qoraal-u-rogista casharadii Shaykh Shariif Cabdinuur Website: Xadiiska waxaa ka horreeyey xadiiskii nahyinaayey in nin uu ku qabeysto biyo ay soo hambaysay oo kasoo hadhay haweeney ama haweenay ay ku qabaysato biyo nin kasoo hadhay [Xadiiska 6aad].
Sheekhu wuxuu casharada u akhrinayaa arday xer ah oo uu kitaabo kale usoo akhriyey, sida Riyaadus Saalixiinka, goobta uu casharada ka akhrinayaana waa Makkah. Sheekhu ma soomaaliyeynayo intaas ee sideeduu ku dulmarayaa. Xadiiskani qisuu lahaa oo qisaduu lahaa waxay ahayd: Cajal dhammaystiran haddan helno inta maqan waan kusoo daraynaa insha Allaah. Midda labaad waxa weeye kaadidisii in biyo lagu shubo oo biyo lagu daahiriyo la amray. Sababka keenay ee anynan nijaas u noqoninna ay tahay iyadoo iska ilaalinteedu mashaqa uu yahay; la iskama maraxm karo.
Shawaahid waa wadarta Shaahid. Guud ahaan afartan kitaab way ka daraja hooseeyaan Saxiix Bukhaari iyo Saxiix Muslim. Markaas Rasuulka- sallal Laahu calayhi wacalaa aalihii wasallam- hal xukun baa la weydiiyey laba xukun buuna ku jawaabay. Laakiin haddii aan lagu dhex kaajin laguna dhex qabeysanin oo biyihii inta lasoo darsado musqusha lala tago oo sidaa lagu qabeysto taas marka dhib maleh.
Maadaama ay dikri tahayna sideeda in loo adeegsado ayaa fiican. Xadiiskan todobaad xadiiskaasuu marka sharxayaayoo nahyigaas Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- muxuu yahay?
Hadduu xadiisku dheer yahay, faqra kasta cinwaan-hoosaad baanu u samaynay si akhrintu u fududaato. Laakiin hadday bulukqul yar yihiin oo qullatayn ay ka yar yihiin nijaaso waa aqbalayaan weeyaan oo way nijaasoobayaan.
Tirmidi isna waxaa u sugnaatay oo uu ku yiri: Markay arrintu sidaa noqotay buu eygii najisul cayn sharcigu ka dhigay oo weelkii uu taabtay ee afka la galay sidaa in loo daahiriyo uu amray baa yaa waxay noqotay xikmada iyo sawaabta lagama maarmaanka ah bay bu,uuqul. Isagoo masjidkii meel kale kaadidii sii gaarsiiyaana mafsada kalay ahayd.
Xadiiskana waxaa weriyey Ibn Maajjah, Abuu Xaatimna waa daciifiyey…. You are commenting using your Facebook account. Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, waxaan adeegsanaynaa [ ]. Taas waxaa kale oo la mid ah, subxaananuhuu wa tacaalaa, radiyal Laahu canhu ama raximahul Bulkuqul, oo aan doorbidnay sidooda Muslimiintu ay u buluuuql weligood inaan u deyno ee aanan waxba turjumin, macnahooduna waa iska cadyahay, Soomaalida badankooduna way fahmayaan.
Illeen Allaah- subxaanahuu wa tacaalaa- waxyaalahan isagaa abuuray sharciganna isagaa amray oo dejiyey.
Buluuqul Maraam |
Xadiiska isnaadkiisuna waa saxiix, isnaadka ragga weriyey [xadiiska] baa la yiraahaa. Saddexdaasuba mid waliba kitaab saxiix uu ku magacaabay buu leeyahay, oo way saxiix yeeleen. Maadaama ay dikri tahayna sideeda in loo adeegsado ayaa fiican. Sida loogu soo daliishanayaana waxa weeyaan dhukhsigii maraaam ku dhaco cabitaankii bulluuqul la yiri hala tiimbiyo oo hala dhexgeliyo. Cinwaanadan qaarkood waa hadalkii sheekha oo aan soo qaadanay, qaarkoodna waa ku dheeraad hadalka sheekha.
Sidaas ayey culumadu sheegeen inay habboon tahay- nuluuqul Laahu calayhi wasallam- taas ayaana sharci ahaan sugan. Wayna kala duwan tahay xadiiskaasu daciif weeye iyo xadiiskaa dacfi baa ku jira. Salliga Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- ma aanaan Soomaaliyeyn ee sidiisa ayaan u deynay.
Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu yiri: Sidaas ayey culumadu sheegeen inay habboon tahay- sallal Laahu calayhi wasallam- taas ayaana sharci ahaan sugan.
– Buluuqul Maraam
Labada dhiigna beeryarta iyo beerka weeyaan. Asxaabu Sunanka ayagana waxaa u sugnaaday oo xadiiskan ay ku weriyeen: Laakiin sida ugu fiicani waxa weeyaan kolba ninkii iyo haweenaydii hadday yihiin inay isla wada qabeystaan.
Waana sidaa uu sheegay oo xadiisku saxiix weeyaan, waxaa saxiix yeelay Albaanii: Abii Daawuud isagana waxaa u sugnaaday: Laakiin qeybta dambe wuxuu ku sheegayaa in xadiiskani daciif yahay. Waa marka la helo weriye KALE oo isaguna xadiiska weriyey. Inuu mid kale yahayna waa iska suuroowdaa, kollaba ibhaamkaas xadiiska la ibhaamiyey waxba xadiisku kuma noqonayo xadiisku saxiix weeyaan. Xadiiska bulhuqul wuxuu noqonayaa, dukhsiga labadiisa baal midna waxaa ku jirta sun midna dawaa ku jirta.
Saydul baxri markaa waxaa lagu fasiray waxa badda laga soo qabsado, dacaamkiisana waxaa lagu fasiray waxa isaga oo dhintay oo badda dul sabbaynaya ama xeebteeda yaalla lasoo qabsado. Sheekhu kitaabka wuxuu ku akhriyey Makkah al-Mukarramah.
Biyuhu hadday badan yihiin oo nijaasadaa ku dhacday ay doorisana iyaguna waa nijaasoobayaan. Abii Saciid Al-Khudrii radiyal Laahu canhu waxaa laga weriyey in uu yiri: Biyahaas la sheegayaana waa biyihii yaraa.
Biyaha baddu markaa waa daahir buluuqull mudahhir ah; waa lagu dahaara qaadan karaa, waa lagu qubaysan karaa, waa lagu weyso qaadan karaa, dharkaa lagu dhaqan karaa najaasadana lagaga bixin karaa, waa lagu istinjoonayaa…, waa mudahhir weeyaan. Markaa waxa weeyaan biyihii socdey iyagu bulluuqul inaanay dhib lahayn.
Kuwa kalena markaa xagga macnaha ayey iyaguna ku weriyeen.
Baalka sunta watuu iska horreysiinayaayoo biyaha isaga xejisiinayaa oo kaga gaashaamanayaa. Xadiiskan naftiisu waa daciif oo siduu kii hore daciif ku ahaa buu kanna daciif ku yahay. Laba mafsadood yaa marwam gudbanaatay: Tanu markaa labadii riwaayo, riwaayadii Muslim ee bulkuqul horreeysay iyo tii Bukhaari bay isku dartay oo labada arrimood bay midba gaarkeed u mancinaysaa reebaysaa ; inuu biyihii fadhiyey ku kaajo gaarkeed bay u nahyidey, biyihii fadhiyey inuu janaabo kaga dhex qabeysto oo dhex galana gaarkeeday u nahyiday reebtay.